ငြိမ်းချမ်းအေး – သိန်းငှက်ပျို ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု | MoeMaKa Burmese News & Media
ခွန်ဆိုင်း ● ဦးထုတ်ပြာတွေ ... လာတယ်... ကြာမယ်
ငြိမ်းချမ်းအေး – သိန်းငှက်ပျို ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု
(မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၀၅၊ ၂၀၁၄
Suffering is the origin of consciousness. Dostoevski (1821-1881)
ဖြစ်တည်မှု ပဓာန အတ္တဘဝမှန်ဝါဒ အရ လူသားရဲ့ ဖြစ်တည်မှု (Existence) ဟာ အဓိပ္ပာယ် (Essence) မတိုင်မီ တည်ရှိရတယ်။ ဖြစ်တည်မှု က သာ ပဓာန၊ ဖြစ်တည်မှု ကို အမှီသဟဲ ပြုပြီးမှသာ “ဖြစ်တည်မှုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်” က ဖြစ်ပေါ် တည်ရှိလာရတယ်။ ဖြစ်တည်မှု၊ ရည်တည်မှု၊ မူဝါဒ ခိုင်မာ၊ မှန်ကန်၊ မသွေဖည်၊ မဖောက်ပြန်ခြင်း က လူသားရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကို ပုံဖော်တယ်၊ ပုံပေါ်စေတယ်။
ခင်မောင်တိုး ရဲ့ ဗမာ့ဂီတ အပေါ် ပြုခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကို စောကြောကြည့်ရင် အောင်မြင်မှု မရသေးခင် နဲ့ ရအပြီး မှာ မပြောင်းမလဲ ဖြစ်တည်မှု၊ ရပ်တည်မှု မှန်ကန်ခဲ့ခြင်း၊ စိုက်လိုက်မတ်တတ် မိမိ ယုံကြည်ရာ ဂီတပုံစံ လမ်းကြောင်းကို ပေါ်ပင်မလိုက်၊ ဈေးကွက် အကြိုက် မကြည့်ဘဲ ရေရှည် ရပ်တည်၊ ဖြစ်တည် လျှောက်လှမ်းခဲ့ခြင်း ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ဟာ အကြီးဆုံး ဖြစ်တယ်။ အသိအမှတ် အပြုထိုက်ဆုံး ဖြစ်တယ်။
၁၉၇၁ စတီရီယိုခေတ်ဦးကတည်းက ဗမာ့ ဂီတလောက ကို ကြိုးစား ခြေချခဲ့တဲ့ ခင်မောင်တိုး ဟာ ၁၉၈၄ “မဟာဆန်သူ” တေးစု ကျ မှသာ တပြည်လုံး အတိုင်းအတာ နဲ့ စီးပွားရေး အရ၊ ဈေးကွက်အရ အောင်မြင်မှု ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီ့မတိုင်ခင် က ခင်မောင်တိုး နဲ့ လိစ္ဆ၀ီများ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် တေးစုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ “အဉ္ဇလီအတွက် ဂီတအဉ္ဇလီ” (၁၉၈၀)၊ “ဝိုင်းရဲ့ဆည်းဆာ” (၁၉၈၁) နဲ့ ၁၉၇၀ ခုနှစ်များ နှစ်ဦး ရှေးဦးတေးစု တွေမှာ ဂီတ အနုပညာ တန်ဖိုး၊ ဂုဏ် ကို သာ ရရှိခဲ့တယ်။ ဒီလို ဈေးကွက် အရ အောင်မြင်မှု မရခဲ့တဲ့ ပထမ ဆယ်ငါးနှစ် မှာ ဇွဲမလျော့၊ အားမပျော့၊ ရပ်တည်ချက် မပျောက်ခဲ့ခြင်းဟာ ခင်မောင်တိုး ရဲ့ ဂုဏ်၊ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်တယ်။
အလားတူပဲ အောင်မြင်ပြီးနောက် ဆက်လက် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ကျန်ဂီတဘဝ ဆယ်စုနှစ်များမှာ အောင်မြင်မှု ကို အလွဲသုံးစားမလုပ်၊ ငွေကြေး အဓိက မရှာဘဲ အနုပညာ ဂုဏ်ကိုသာ ပဓာန ထား အားပြု မယိုင်မလဲ ဖြစ်တည်မှု မှန်ကန်ခဲ့ခြင်းဟာလည်း ခင်မောင်တိုး ရဲ့ ဂုဏ်၊ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ ဒီလို ခင်မောင်တိုး ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု မှန်ကန်ခဲ့ခြင်း ဟာ ခင်မောင်တိုး ရဲ့ ရောင်းရင်း မဇ္ဇျိမလှိုင်း အုပ်စု နဲ့ ခင်မောင်တိုး ရဲ့ မိသားစု တို့ရဲ့ ရပ်တည်မှု၊ ပံ့ပိုးမှု ဟာ အရေးပါ ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ထည့်သွင်း အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်။
Life begins on the other side of despair. Sartre (1905-1980)
ခင်မောင်တိုး ရဲ့ ဂီတ ဘဝ ကို ခုနှစ် သက္ကရာဇ် ဆယ်စုနှစ်တွေ အရ မကြည့်ဘဲ အောင်မြင်မှု အထွတ်အထိပ် ရခဲ့တဲ့ နှစ်ကာလ အပိုင်းအခြား အရ ခွဲခြား လေ့လာကြည့်မယ် ဆိုရင် “မဟာဆန်သူ” တေးစု ထွက် ပြီးနောက်ပိုင်း ဆယ်စုနှစ် (၁၉၈၅-၁၉၉၅) ဟာ ခင်မောင်တိုး ရဲ့ “ရွှေရောင်နှစ်များ ဆယ်စုနှစ်” လို့ သတ်မှတ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီ ဆယ်စုနှစ် မှာ ခင်မောင်တိုး ဟာ သူ့ ဘဝ မှတ်တိုင် တေးစု တွေ အများအပြား ထွက်ရှိနိုင်ခဲ့သလို အောင်မြင်တဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေလည်း အများအပြား သီဆိုခဲ့တယ်။ ဒီ ဆယ်စုနှစ် ရဲ့ နှောင်းပိုင်း ကာလ အောင်မြင်မှု အမြင့်ဆုံးအချိန် ၁၉၉၃ မှာ ခင်မောင်တိုး ဟာ “သိန်းငှက်ပျိုတို့ရဲ့ သဘာဝ” ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပန်တော်ဦး တေးစု၊ မြစ်တစ်စင်း ဖြစ်တည်မှု တကိုယ်တော် တေးစု နှစ်ခု တနှစ်တည်း ဆက်တိုက် ထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် တကိုယ်တော် စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲ (၂၇-နိုဝင်ဘာ-၁၉၉၃) ကိုလည်း အောင်မြင်စွာ လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါဟာ ဇွဲရှိရှိ၊ တစိုက်မတ်မတ် ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ ခင်မောင်တိုး ရဲ့ ဂီတ ဘဝ ခရီးကြမ်းရှည်ကြီးရဲ့ ဖြစ်တည်ခဲ့မှု၊ ရပ်တည်ခဲ့မှု (Existence) မှန်ကန်ခဲ့ခြင်းရဲ့ အသီးအပွင့် အောင်မြင်မှု ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ခံစားရခြင်း ဖြစ်တယ်။
ခင်မောင်တိုး ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ “ဖြစ်တည်မှု အဓိပ္ပာယ်” ကို “သိန်းငှက်ပျိုတို့ရဲ့ သဘာဝ” သီချင်း နဲ့ အတူ ဆက်စပ် အသားပေး ဆွေးနွေးလိုခြင်းက ရပ်တည်မှု မှန်ကန်ခဲ့တဲ့ ခင်မောင်တိုး ရဲ့ ရုပ်လုံးကို ကို သီချင်းရဲ့ ဒဿန နဲ့ ဆက်စပ် မြင်စေချင်လို့ပါ။
သီချင်းရဲ့ မူလ က ပန်းချီမောင်ဒီ ရဲ့ ကဗျာ ပါ။ ကဗျာ ကို စကားလုံး တလုံး တပါဒ မတည်း၊ မဖြတ်ဘဲ ခင်မောင်တိုး ရဲ့ ရဲဘော်ကြီး ကိုရဲလွင် က သံစဉ်သွင်း တေးဖွဲ့ခဲ့တယ်။
အနုပညာ ပစ္စည်းတခုခု ဟာ ဖန်တီးသူတွေ က အနုပညာဂုဏ်မြောက်အောင် ဖန်တီးပြီး နောက်မှာ အဓိပ္ပာယ် ကို ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ သဘာဝ ယုတ္တိကို ဆင်ခြင်ခြင်း၊ ဒဿန ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေဟာ ခံစားသူ ရဲ့ အသိ၊ အမြင်နဲ့ ဖွင့်ဆိုမှု ကသာ အဓိက ပိုကျတယ်။
“တကယ့် အနုပညာ” ဂုဏ်မြောက်တဲ့ အနုပညာပစ္စည်း တခု ဟာ ခံစားသူ တဦးချင်း ရဲ့ အသိ၊ အမြင်၊ အတွေးအခေါ် ရေချိန် အပေါ် မူတည်ပြီး အနိမ့်ဆုံး ရည်မှန်းချက် ဖြစ်တဲ့ ဖျော်ဖြေရေး ဆိုတဲ့ အဆင့် ကနေ ဒဿနိက အတွေးအခေါ် တခုခု ပေးခြင်း၊ ဖွင့်ဆိုခြင်း ဆိုတဲ့ အမြင့်ဆုံး ရည်မှန်းချက် အထိ ဂုဏ်ရည် အမျိုးမျိုး တည်ရှိတယ်။
ပန်းချီ မောင်ဒီ ရဲ့ စကားလုံး ဖြင့် အတွေးအခေါ် တန်ဆာတင်မှု၊ ကိုရဲလွင် ရဲ့ ဂီတဖွဲ့စည်း ပုံဖော်မှု၊ ခင်မောင်တိုး နဲ့ မဇ္ဇျိမလှိုင်း ရဲ့ ဖန်တီး သီဆိုမှု ရဲ့ ရလဒ် “သိန်းငှက်ပျိုတို့ရဲ့သဘာဝ” အနုပညာပစ္စည်း ကိုလည်း အဓိပ္ပာယ် အမျိုးမျိုး၊ ရှုထောင့် အဖုံဖုံ က နေ ရှုမြင်ခံစား၊ သုံးသပ် နားလည် နိုင်ကြပါမယ်။
(၂၀) ရာစု ရဲ့ ထိပ်တန်း အတွေးအခေါ် ပညာရှင်တဦး ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်တည်မှု ပဓာန အတ္တဘဝမှန်ဝါဒီ Sartre က “လူသား ဟာ ဘဝ ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု ပြဿနာများ၊ ဝေဒနာများ၊ ဒုက္ခများ ကို သုံးသပ်ရာမှာ အကျိုး၊ အကြောင်း ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ မိမိ ဘာသာ မိမိ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ် ဆင်ခြင်နိုင်ရမယ်။ မိမိရဲ့ ကံကြမ္မာ၊ မိမိရဲ့ အနာဂတ် ကို မိမိ ဘာသာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရှိရမယ်” လို့ ဆိုခဲ့တယ်။
စာရေးသူ ရဲ့ သဘော အရ “သိန်းငှက်ပျိုတို့ရဲ့သဘာဝ” က ပေးတဲ့ ကျိုးကြောင်းသင့် ဆင်ခြင်တုံ တရား ဉာဏ် အသိ နဲ့ ခံစားမြော်မြင်မှု ဈာန် အသိ ဟာ လူသားရဲ့ ဖြစ်တည်မှု ပြဿနာ နဲ့ ကိုယ့် ကြမ္မာ ကိုယ် ဖန်တီးခွင့်၊ ဖန်တီးခြင်း မေးခွန်းတွေ ကို ဖြေဆိုနိုင်ဖို့ လမ်း ပွင့်စေတယ်၊ လမ်းဖွင့်ပေးတယ်၊ ဒီ လမ်းစ ကို သိန်းငှက်ပျို ရဲ့ သဘာဝ ကို သင်္ကေတ ပြု ပုံဖော်မှုက တဆင့် ချပြခဲ့တယ်လို့ ယူဆတယ်။
ဒီလို တွေးစရာ ပါတဲ့၊ ယူစရာ ရှိတဲ့၊ ခံစားသူ အတွက် ‘ကျန်’ ခဲ့တဲ့၊ လေးနက်တဲ့ အတွေးအခေါ် တခုခု၊ မြော်မြင်မှု တခုခု ကို ပေးတဲ့၊ ‘ယူ’ ရင် ‘ရ’ နိုင်တဲ့ အနုပညာဂုဏ်မြောက် ပစ္စည်း အမြောက်အမြား ကို ဂီတ ဆိုတဲ့ အနုပညာ ရသ ပုံစံ တမျိုး နဲ့ လူသာမန် လူအများစု ပါ သောတ အာရုံ တွယ်ငြိ ခံစား နားဆင်၊ နားဝင်လွယ်အောင် စွမ်းဆောင် ကျေးဇူးပြုပေးသွားခဲ့တဲ့ ဂီတပညာရှင် ခင်မောင်တိုး ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူး ကို အောက်မေ့ ဂုဏ်ပြုလျက်…။
ဆရာ မောင်ဒီ ရဲ့ အနုပညာ များ အဓွန့်ရှည်စေ..။
ကိုရဲလွင် (မဇ္ဈိမလှိုင်း) ရဲ့ အနုပညာ များ ရှင်သန်စေ..။
ခင်မောင်တိုး သီချင်းများ ထင်ကျန်စေ..။
ဗမာ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဂီတလောက တိုးတက် စည်ပင် စေ..။
♬ ♪ ♩ ♭ ♫ ∮ ♫ ♪ ♫ ♪ ♬ ♪ ♩ ♭ ♫ ∮ ♫ ♪ ♫ ♪ ♬ ♪ ♩ ♭ ♫ ∮ ♫ ♪ ♫ ♪ ♬ ♪ ♩ ♭ ♫ ∮ ♫ ♪ ♫ ♪
သိန်းငှက်ပျိုတို့ရဲ့ သဘာဝ / ငှက်တို့ရဲ့ သဘာဝ
သ်ိန်းငှက်ပျိုတို့ရဲ့.. ဘဝ.. အစ.. ဆိုတာ..
ဟို.. … ….
ငှက်ငယ်ဟာ.. ကြောက်လန့်တကြား.. နဲ့..
တအား.. အော်.. ဟစ်.. ရင်း..
သူ့.. ရဲ့.. အသည်းနှလုံး.. ဟာ..
ဖြုန်း.. ဆို.. ပြောင်းသွားခဲ့တယ်လို့..
ဒို့.. အဘိုး.. က..
ကွမ်း.. တရိုး.. ဝါးရင်းနဲ့..
သိန်းငှက်ပျိုတို့ရဲ့သဘာဝ၊ စာသား – ပန်းချီ မောင် ဒီ ၏ ကဗျာ၊ သံစဉ် – ကိုရဲလွင်၊ တေးဆို – ခင်မောင်တိုး၊ တေးဂီတ – မဇ္ဇျိမလှိုင်း၊ တေးစု – ပန်တော်ဦး (၁၉၉၃)
YouTube Music Video URL: http://youtu.be/TSK3Dq38WHw
(၁၅၊ နိုဝင်ဘာ၊၂၀၁၄ တွင် ကျရောက်မည့် ဂီတပညာရှင် ခင်မောင်တိုး ကွယ်လွန်ခြင်း (၂) နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အောက်မေ့ဖွယ် ရက်သီတင်းပတ် အဖြစ် မနှစ်က ရေးသား စီစဉ် တင်ဆက်ခဲ့သည့် ခင်မောင်တိုး ကွယ်လွန်ခြင်း တနှစ်ပြည့် မိုးမခ အစီအစဉ် (၃) (နိုဝင်ဘာ၊ ၀၇၊ ၂၀၁၃) ကို တည်းဖြတ် ပြန်လည် တက်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါး ပါ အာဘော် နှင့် အချက်အလက် များကို ဝေဖန် ရန် nyeinchanaye81@gmail.com သို့ စာရေး နိုင်သည်။)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ရသဆောင်းပါးစုံ, လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ, ငြိမ်းချမ်းအေး